Labsiin Gabrummaa Hoonga’aa Jira – Oromedia
Home » Uncategorized » Labsiin Gabrummaa Hoonga’aa Jira
(Oromedia, 24 Onkoloolessa 2016) Labsiin gabrummaa kana Wayyaaneen qabsoo oromoo dhaabuuf baaftee jirtu bakka hedduutti fashalaa jira.
Odeessi nu gahaa jiru akka ibsutti, Wayyaaneen diddaa ummataa dhaabuuf filannoo qabdu hunda yaaltee turte.
Garuu diddaa fi mormii ummataa ittisuu dadhabuun gara filannoo isa dhumaatti seente. Filannoon kunis akkuma dursa tilmaamametti kufaatii Wayyaanee dhiyeessaa jira.
Qabsoo Oromoo milkeesuuf duulli guddaan karaa hedduu gaggeeffamaajira. Iccitii qabsoo Oromoo bira gahuu kan dadhabde Wayyaaneen waraanaa fi meeshaa gurguddaa Oromiyaa keessa facaasuun doorsisaa fi tarkaanfii gara jabinaan guutame fudhadchaa jirti.
Kun garuu Qeerroo Oromoo durumaanuu kutatee jiru daran dallansuu keessa galchee jira.
Next: Gaazexeessitooti Oromoo sadii hojiirraa aryataman